Kalidou Koulibaly oo qarka u saaran u dhaqaaqista Premier League… (Kooxda uu ku biirayo iyo qiimaha ay ku qaadaneyso) – Gool FM
Kalidou Koulibaly oo qarka u saaran u dhaqaaqista Premier League… (Kooxda uu ku biirayo iyo qiimaha ay ku qaadaneyso)
Haaruun June 26, 2020
(England) 26 Juun 2020. Difaaca kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly ayaa ugu dambeyn soo caga dhiganaya dalka Ingiriiska oo kooxo badan uga gacan haatinayeen sanadihii ugu dambeeyay.
Koulibaly ayaa hadda qarka u saaran ku biirista kooxda Manchester City, halka wararka qaar ay sheegayaan inay hubanti tahay ka mid noqoshada kooxda Macallin Pep Guardiola uu hoggaamiyo.
Xiddiga reer Senegal ayaa Etihad ku imaanaya qiimo lacageed dhan 72 milyan oo gini oo u dhiganta 80 milyan oo euro, waxaana xusid mudan inuu iska diiday u dhaqaaqista naadiga Newcastle United.
Qaar ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub ayaa xiiso badan u muujinayay Koulibaly lixdii sano ee la soo dhaafay, sida Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, Barcelona iyo Real Madrid.
Wararka ka imaanaya dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in madaxweynaha Napoli ee Auerlio De Laurentiis uu u iibinayo 29-jirkan si uu lacago badan qasnadda kooxda ugu soo celiyo, isla markaasna uu xagaaga kula soo wareego xiddigo kale.
Koulibaly ayaa lagu soo warramayaa inuun heshiis shan sano ah u saxiixi doono Man City, isagoo Etihad ugu biirayo qiimo lacageed dhan 72 milyan oo gini ama 80 milyan oo euro.
Majaladda Isbaanishka ah ee Mundo Deportivo ayaa warineysa in difaacan uu iska diiday kooxaha La Liga ugu awoodda badan ee Barca iyo Madrid, si la mid ah PSG iyo Man United.
Kabtan ku xigeenka kooxda Napoli ayaa fasal ciyaareedkan u saftay kooxda reer Talyaani 24 kulan dhammaan tartammada, inkastoo bishii Jannaayo ee sanadkan uu dhaawac soo gaaray.
Koulibaly oo Serie A soo caga dhigtay 2014 xilli uu naadiga Metz kaga soo dhaqaaqay qiimo dhan 6.5 milyan oo euro ayaa loollan adag oo dhanka booska difaaca dhexe ah kala kulmi doona Aymeric Laporte, Fernandinho, Nicolas Otamendi iyo John Stones.
"Waxa uu la mid yahay Xavi" - Lionel Messi oo ammaan ugu qubeeyay Arthur Melo oo tagaya
"Liverpool waxay kulan walba u ciyaartay sida inay tahay fursaddoodii ugu dambeysay" - Pep Guardiola oo ka fal celiyay ku guuleysiga Reds ee Premier League